Facebook Knowledge Sharing « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » Facebook Knowledge Sharing
ပဋ္ဌာန်းအဓိပ္ပါယ်ရှင်းချက်နှင့် အမေးအဖြေ (ခင်ချိုထွန်းစာပေ)
Myanmar Journal shared Hlaing Bwa‘s photo.
ဘောစတွန်ဗုံးခွဲမူ သံသယရှိသူတဦး (ရဲပစ်ခတ်မူကြောင့်)
သေ၊ ကျန်တဦး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသဖြင့် အင်အား
ဘောစတွန်ဗုံး ခွဲသူဟုယူဆရသူ Tamerlan Tsarneav (26)
… သည် ရဲနှင့်ပစ်ခတ်မူဖြစ်ပြီးနောက် သေဆုံးသွားသည်။ ဒုတိယ
သံသယရှိသူ Dzhokar A. Tsarnaev (19) မှာ ထွက်ပြေး
လွတ်မြောက်နေသဖြင့် အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ပိုက်စိပ်တိုက်
ရှာဖွေနေကြောင်းသိရှိရသည်။ ဘောစတွန် ဧရိယာအတွင်း
ခရီးသည်တင် မြေအောက်ရထားပြေးဆွဲမူကို ရပ်တန့် ထား
လိုက်ကြောင်း မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမူး
Deval Patrick ကထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလိုက်သည်။ ဘောစတွန်
ရှိ ဟားဘတ်တက္ကသိုလ်နှင့် M.I.T (Massachusetts Institute
of Technology) တို့ အား ပိတ်ထားကြောင်းသိရသည်။
မနေ့ ညက ပစ်ခတ်မူတွင် (M.I.T) မှ တက္ကသိုလ်ရဲတဦး
သေနတ်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြား ရဲတယောက်လည်း ဒဏ်ရာ
ရရှိခဲ့သည်။"ဗုံးခွဲမူတွင် သံသယရှိသူ" ဟုယူဆရသူမှာ ကားတစီး
အားပြန်ပေးဆွဲပြီး ထွက်ပြေးစဉ် ရဲမှလိုက်လံဖမ်းဆီးရာတွင်
ပစ်ခတ်မူဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘောစတွန်ရဲအရာရှိ Ed Davis
က "သူဟာ အကြမ်းဘက်သမားတဦးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျုပ်
တို့ ယုံကြည်ပါတယ်" ("We believe this to beaterrorist,"
said Boston Police Commissioner Ed Davis.) ဟု ထုတ်
သံသယရှိသူနှစ်ဦးသည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ချက်ခ်ျညန် မွတ်ဆလင်
ခွဲထွက်ရေးဒေသမှ မွတ်ဆလင်များဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည် ဆယ်စု
နှစ်တခုဝန်းကျင်က ရုရှားနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် အမေရိကန်
သေ၊ ကျန်တဦး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေ
The only known golden zebra in existence!
Like · · Share · 4,3201851,437 · 8 hours ago
အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ကုန်ပစ္စည်းတွေ အကောက်ခွန်မဲ့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်အောင် လက်ခံသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီး လာမယ့်ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့မှာ ကြားနာပွဲတစ်ခုကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကြားနာပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံအပြင် လာအိုနိုင်ငံလည်း ပါဝင်ပါမယ်။
အဲဒီလို ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အရေးခံစားခွင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ရဖို့အတွက်လည်း မြန်မာအစိုးရဖက်က တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ် မတိုင်ခင်က မြန်မာနိုင်ငံက ကုန်ပစ္စည်းတွေ အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာ အကောက်ခွန်မဲ့ တင်ပို့ရောင်းချခွင့်ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရလက်ထက် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေတာနဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှာ အဲဒီအထူးအခွင့်အရေးတွေကို အမေရိကန်အစိုးရက ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာပါ။
GSP ကုန်သွယ်မှု အထူးခံစားခွင့်ဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ စီးပွားရေးတိုးတက်လာအောင် အဲဒီတိုင်းပြည်တွေက ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာ အကောက်ခွန်မယူပဲ ရောင်းချခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒီအစီအစဉ်မှာ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံ ၄၂ နိုင်ငံက ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း ၅၀၀၀ လောက် အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာ ရောင်းချခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈.၅ ဘီလီယမ် တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။See More
Like · · Share · 26916331 ·6hours ago ·
← Daily Facebook News	National Security နဲ့ဘာနဲ့မှလဲယူလို့မရပါဘူး၊ Development နဲ့လဲယူလို့လဲမရပါဘူး၊ by Ohn Mar Oo →